Dil ka dhacay degaan ka tirsan Gobolka Galgaduud & faah faahin laga helayo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dil ka dhacay degaan ka tirsan Gobolka Galgaduud & faah faahin laga...
Maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa la sheegay in duleedka Degmada Balanbale ee Gobalka Galgaduud ay ku dileen Nin la sheegay in uu xoolo dhaqato ahaa, iyaga oo dilka kadib goobta ka baxsaday.
Wararla la helay ayaa sheegaya in ka hor dilka in maleeshiyaad hubeysan ay rasaaseeyeen Booyad u socotay degmada Balanballe, hayeeshee maleeshiyaad kale oo ka careysan ay weerareen ka dibna dileen ninkaan reer Miyiga ah oo Gurigiisa Kusugnaa.
Dilkan ayaa waxaa uu salka ku hayaa aanooyin qabiil oo dhowr jeer ooh ore kusoo lab laabtay degaannada hoostaga degmada Balanbale ee Waqooyiga Gobolka Galgaduud.
Qaar kamid ah dadka ku nool degmada Balanballe ayaa waxaa ay sheegeen in dilka Ninka Xoolo dhaqatada ahaa iyo Booyada la rasaaseeyay siweyn looga dareemay degmada, isla markaana ay macquul tahay inay ku baxaan Maamulka degmada.
Previous articleShir u socda Ra’iisul Wasaare Rooble & Midowga Musharixinta
Next articleJubaland oo ka hadashay abaaraha ka taagan Gobolka Gedo